कसरी आईफोन s एस को थ्रीडी टच काम गर्दछ? आईफोन समाचार
सँगै आएको सबैभन्दा उल्लेखनीय नवीनता आईफोन 6s र आईफोन 6s प्लस निस्सन्देह स्क्रिन हो 3D टच। हामी यो बहस गर्न सक्छौं कि यो अधिक वा कम उपयोगी छ, तर यो दबाब मान्यता प्रणालीको दोस्रो पुस्ता हो जुन १ months महिना अघि पहिलो पटक एप्पल वाचको पहिलो उपस्थितिको साथ प्रस्तुत गरिएको थियो। फोर्स टच जस्तो होइन जुन दुई विभिन्न प्रकारको दबावमा पहिचान गर्दछ, थ्रीडी टचले मान्यता दिन्छ स्पन्दन को तीन अलग प्रकार। एप्पलले यी प्रत्येक कुञ्जी स्ट्रोक / इशाराहरूलाई एउटा नाम दिएका छन्, पहिलो विशेष प्रेशर पीक र दोस्रो पप। यस लेखमा हामी कसरी पूरै नयाँ प्रेशर पहिचान प्रणालीले काम गर्छ भनेर वर्णन गर्ने प्रयास गर्नेछौं।
1 कसरी आईफोन s एस / प्लस को थ्रीडी टच काम गर्दछ
1.1 झलक र पप
1.2 द्रुत पहुँचको रूपमा
1.3 अनुप्रयोगहरू / खुला अनुप्रयोग चयनकर्ता बीच स्विच गर्नुहोस्
1.4 आईओएस keyboard किबोर्डमा भर्चुअल ट्र्याकप्याड प्रयोग गर्नुहोस्
कसरी आईफोन s एस / प्लस को थ्रीडी टच काम गर्दछ
झलक र पप
यी ती दुई शब्दहरू हुन् जुन एप्पलले दुई विशेष दवावहरूको सन्दर्भमा छनौट गरेको छ। पीक यसको अर्थ "स्नुपिंग" जस्तो छ र यो दुई विशेष दबावहरू मध्ये पहिलो हो वा, समान चीज के हो, कम गहिरो। पीकको साथ हामी गर्न सक्दछौं, उदाहरणको लागि, कुनै पनि उपयुक्त अनुप्रयोगको लिंकलाई छुनुहोस् र हामी भित्र रहेको अनुप्रयोगलाई छोड्नु नै यसमा के छ देख्ने छौं। हामी पनि गर्न सक्छौं पूर्वावलोकन फोटो रीलको र, निश्चित रूपमा, लाइभ फोटोहरू तिनीहरूलाई प्रविष्टि नगरीकन सार्नुहोस्। पीकको कार्य तबसम्म जारी हुनेछ जब सम्म हामी थिच्न वा पप गर्न छाड्दैन।
यदि हामीले झलक पूरा गर्यौं भने, हामी गर्न सक्दछौं स्लाइड माथि हेर्न उपलब्ध विकल्पहरू। उदाहरण को लागी, यदि हामी एक फोटो पूर्वावलोकन गर्दैछौं र हामी माथि स्लाइड, हामी यसलाई साझा वा मनपर्ने को रूपमा मार्क गर्न सक्दछौं।
पप यो तीन को गहिरा दबाव हो। तपाईले सोच्नु पर्छ कि पप फुटेको जस्तै हो र बुलबुले खोल्नु जस्तै हो जुन पिक हो, यद्यपि भविष्यमा यसले अधिक चीजहरूको लागि प्रयोग गर्दछ। यदि हामीले कुनै फाईल, मेल, लि ,्क इत्यादि राख्नु भएको छ भने, हामी पपलाई "स्नुपिंग" भित्र राख्नका लागि बनाउन सक्छौं।
द्रुत पहुँचको रूपमा
पहिलो र के थ्रीडी टचको बारेमा सब भन्दा धेरै परिचित छ केहि निश्चित खोल्ने सम्भावना हो आइकनहरूबाट सर्टकटहरू गृह स्क्रिनबाट, तपाई छविमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन यस लेखको हेड गर्दछ। आईफोन s एस / प्लसमा, यदि हामी सामान्य छोटो प्रेस गर्छौं भने, हामी अनुप्रयोग हामीसँग जस्तै खोल्नेछौं। एप्लिकेसनको उन्मूलन पनि उही तरिकाले कार्य गर्दछ, जुन आइकनमा हल्का टच राखेर प्राप्त हुन्छ जबसम्म ती सबै कम्पन गर्न सुरू गर्दैनन् र त्यसपछि एक्समा क्लिक गर्नुहोस्। जिज्ञासाको रूपमा, यदि हामी दबाबमा थोरै खर्च गर्छौं भने, यसले देखाउँदछ कि यसले सर्टकटहरू सुरूवात गर्न प्रयास गर्दछ।
कुनै पनि उपयुक्त अनुप्रयोगबाट केहि सर्टकटहरू खोल्नको लागि, हामीले भर्खरै गर्नु पर्छ अलि कडा थिच्नुहोस्। यदि हामी दबाबले ओभरबोर्डमा जान्छौं त्यसले केही फरक पार्दैन, त्यस समयमा घर पर्दामा केवल एक ही इशारा उपलब्ध छ। यस तरीकाले हामी क्यामेरा खोल्न सक्छौं सेल्फी लिन, क्यालेन्डरमा घटना सिर्जना गर्न वा टेलिग्रामको साथ सन्देश पठाउन।
अनुप्रयोगहरू / खुला अनुप्रयोग चयनकर्ता बीच स्विच गर्नुहोस्
एक भन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो प्रकार्य मनपराउँदछन्। आईफोन s एस / प्लसमा हामीसँग खोल्न विकल्प छ अनुप्रयोग चयनकर्ता वा सुरूवात बटन थिच्न बिना तिनीहरू बीच कदम। यसको लागि हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
अनुप्रयोगहरू बीच स्विच गर्न, हामी केवल हाम्रो औंलाको स्क्रिनको बायाँ कुनाबाट दायाँ पट्टि स्लाइड गर्नेछौं। सफारीमा एक पृष्ठ पछाडि फर्कने इशारा नगर्नको लागि, उदाहरणका लागि, हामीले अधिक दबाब लागू गर्नुपर्नेछ, ताकि आईफोनले वर्णन गर्दछ कि हामी अघिल्लो अनुप्रयोगमा जान चाहन्छौं र हामी पछाडि जान चाहँदैनौं। पृष्ठ
एप्लिकेसन सेलेक्टर खोल्नको लागि, हामी के गर्छौं एप्लिकेसनहरू बीच स्विच गर्नु बराबर हो, तर हामी स्क्रिनको बिचमा इशारा रोक्छौं। यस तरिकाले, हामीसँग एप्लिकेसन सेलेक्टर हुनेछन् मानौं यदि हामीले सुरु बटन दुई पटक थिचेको हो।
आईओएस keyboard किबोर्डमा भर्चुअल ट्र्याकप्याड प्रयोग गर्नुहोस्
केहि कसैलाई मनपर्दैन, एप्पल को उपयोग को सम्भावना हटाईयो ट्रयाकप्याड भर्चुअल एउटा बेटामा आईफोनमा र यसलाई फेरि समावेश गरिएको छैन। हो, यो आईफोन s एस / प्लसमा उपलब्ध छ र यसको प्रयोग एकदम सरल छ जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कसरी जान्छ। हामीले कुनै पनि अनुप्रयोगमा के गर्नुपर्दछ जसमा पाठ प्रविष्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई अझ कडा प्रेस गर्नु हो ताकि कुञ्जीहरूका अक्षरहरू अदृश्य हुन्छन्। एक पटक तिनीहरू हराइसके पछि, हामी थिच्न रोक्छौं, तर हामी स्क्रिन थिच्न रोक्दैनौं र हामी पाठ छनौट गर्न फेरि कडा थिच्दछौं। यदि हामीले यो यसरी गरेनौं भने मात्र हामी सर्ने कर्सर मात्र हुनेछ।
नोट: यो सुविधाको लागि उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ कि सबै समयमा दबावको शक्ति कायम राख्नु आवश्यक छैन। उदाहरण को लागी, यदि हामीले पीक गरेका छौं भने हामी थिच्न रोक्न सक्छौं र आफ्नो औंला पर्दामा राख्न सक्छौं, हामी भर्चुअल ट्र्याकप्याड प्रयोग गर्नका लागि।
प्रेशर पहिचान प्रणालीका साथ प्रदर्शनहरू मोबाइल प्रदर्शनको भविष्य हुन्, तर समस्या यो हो कि विकासकर्ताहरू अझै यसको प्रयोगको लागि तल झर्छन्। पक्कै पनि भविष्यमा यो क्षणको भन्दा धेरै उपयोगी हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन टर्मिनलहरू » आईफोन 6s » कसरी आईफोन ss को थ्रीडी टच र यसको पीक र पप कार्य गर्दछ
अर्को महिना सम्म मसँग मेरो आईफोन छैन, आज म एक साथीको s को परीक्षण गर्दै थिएँ र मैले महसुस गरे कि थ्रीडी टचमा अनुकूलनको अवधि चाहिन्छ। यदि तपाईं यसलाई अलि प्रेस गर्नुभयो भने अनुप्रयोगहरू हल्लाउन थाल्छन् र यदि तपाईं जानुहुन्छ भने यस्तो देखिँदैन कि यसले केही पनि गर्छ, तपाईंले पर्याप्त प्रेस गर्नु पर्छ र यो पहिलो पटक बाहिर आउँदैन। यो यति अनौंठो काम गर्दछ कि हामी सेटिंग्समा हेर्दै थियौं यदि केही राम्रो तरिकाले चयन गरिएको थिएन र यो बाहिर आयो कि त्यो त्यस्तो केही थिएन। हामी केवल यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्ने थिएनौं, सबै पोष्टहरूमा मैले यो विषयमा पढेको हो कि कसरी यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा सबै कुरा राम्ररी वर्णन गरिएको छ, तर वास्तविक सनसनीहरू उनीहरूले वर्णन गरे जस्तै छैनन्।
यो सत्य हो जब मैले 6s को कोशिश गरेको छु मैले त्यसलाई अनुकूलन गर्नुपर्दछ। Vdd म धेरै प्रयोग तर राम्रो देख्दिन
जब तपाइँ पप गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै रोकिदैन। २ हप्ता पहिले मैले bought आईफोन bought किनेको र धेरै खुशी, हो, पप बिना
म झलक र पप प्रयोग गर्न सक्दिन किनकि मलाई सहि प्रेशर कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन ...
तकियालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, तकिया। कुनै डर बिना प्रेस, तर एक लामो समय को लागी। तपाईले कसरी हेर्नु हुन्छ हेर्नुहोस्। यदि तपाईं पप गर्न चाहानुहुन्छ भने, फेरि थिच्नुहोस्, यदि यो अलि बढी कडा हुन सक्छ। यदि तपाईंले प्रेसलाई धेरै छोटो बनाउनुभयो भने (पप) यो पप बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ।
म झलक र पप प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्दिन !!! अनुप्रयोगहरू काम्छ मानौं म स्थानहरू परिवर्तन गर्न चाहान्छु
कसैले मलाई मद्दत गरे !!!
लौरा Ll भन्यो
म पनि सकेन! तपाईंले थ्रीडी टचको संवेदनशीलता परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, निम्नानुसार: सेटि -्हरूमा जानुहोस्-सामान्य-पहुँच - थ्रीडी टच र त्यहाँ संवेदनशीलता चयन गर्नुहोस्, यसले फर्ममा राखेर मेरो लागि काम गर्यो! भाग्यले साथ दिओस्!
Laura Ll लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो लागि थ्रीडी टच सक्रिय गर्न यो असम्भव थियो, जबकि मसँग यो छ र छविहरू लाइभ फोटोमा छन्। मेरो अनुप्रयोग प्रत्येक चोटि प्रयास गर्दा हल्लाउँछ, मलाई के गर्ने थाहा छैन, यसले मद्दत पुर्‍याउँछ
Pilarcarmona लाई जवाफ दिनुहोस्
यो प्रेस गरिएको छैन र मैले खोज ईन्जिन प्राप्त गरें आइकन विकल्पहरू होइन
मारिया velia लोपेज भन्यो
कृपया मलाई सहायता गर्न सक्ने कोही छ, मसँग आईफोन plus प्लस छ र जब म सामान्य-पहुँचतामा जान्छु त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन जहाँ यो थ्रीडी टच भन्छ, स्क्रिनमा मसँग छैन, केवल अनुप्रयोगहरू काम्छन्।
मारिया velia लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
उत्पत्ति मेदिना भन्यो
मसँग आईफोन7छ र मलाई मारिया भेलियासँग त्यस्तै भयो। म अनुप्रयोगमा कुचल्दछु र यो हल्लाउँछु जस्तो मैले यसलाई मेट्ने छु। मद्दत
उत्पत्ति मेदिनालाई जवाफ दिनुहोस्
नयाँ फिशिले तपाईंको आईक्लाउड कुञ्जीहरू चोर्न चाहन्छ